चितवनमा नेपाल फर्मा एक्स्पोको राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन • Health News Nepal
चितवन, ९ बैशाख २०७९
चितवनमा औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरुको बृहत प्रदर्शनी नेपाल फर्मा एक्स्पो आजबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नु भएको छ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)को आयोजनामा एक्स्पो सुरु भएको हो। प्रदर्शनीको उद्घाटन क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले औसधि उत्पादनमा नेपालले ठुलो फड्को मारेको बताउनुभयो । धेरै किसिमका औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। औषधि उत्पादनका छेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। बढ्दो प्रदुषणले स्वास्थ्यमा समस्या ल्याएको छ। अर्थतन्त्र संग औषधि उत्पादन क्षेत्र जोडिएको भन्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै ठुलो सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले औषधि उद्योग क्षेत्रमा विकास गरेर रोजगारीको समेत सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले औषधिको आयातलाई रोकि अब निर्यात समेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाल औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष प्रज्वल जङ्ग पाण्डेले नेपालमा पनि औसधि उत्पादन हुन्छ र भन्ने अवस्थाबाट अहिले एक सय भन्दा बढी औषधि उधोग हरु संचालित रहेका बताउनुभयो । स्वागतका क्रममा उहाँले नेपाली औसधि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुल क्षमतामा ५० प्रतिशत मात्रै औषधि उत्पादन भएको बताउनुभयो ।
एपोनका पुर्व अध्यक्ष दिपक प्रसाद दाहालले औषधिमा आत्मनिर्भर हुन चाहेको बताउनुभयो । २०२७ सालबाट रेबिजको भ्याक्सिन बनाउन थालिएको हो। २०३६ सालमा औसधि बनाउन सुरु भयो र २०७२ सालबाट उधोगले औषधि उत्पादन गर्छन् । बाँकी ३२ कम्पनी बजारमा औषधि उत्पादन गर्ने क्रममा रहेका छन् । भारतले धेरै सस्तोमा औसधि बनाउँछ। सरकारी स्तरमा औसधि अनुसन्धान गर्ने गरेका छन् । भारतले २२ खर्बको औषधि निर्यात गर्छन् । औषधि उधोगमा सरकारले धेरै सहयोग गरेको छ। बङ्गलादेशमा पनि औषधिको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि गरेको छ। बाङ्गलादेशले १२० देशमा निर्यात गरिरहेको छ। अहिलेसम्म औषधि सल्लाहकार समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
नेपालमा प्रतिस्पर्धा धेरै रहेको छ। अझैपनि ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। भारतले ८ प्रतिशत उत्पादन बढायो भने नेपाललाई निशुल्क दिन सक्छ। यो हाम्रो लागि गम्भीर बिषय हो।
अहिले नेपाली उधोगका सेनिटाइजर बिक्दैन, भारत बाट आएको मात्र बिक्रीवितरण भइरहेको छ। तीन वर्षमा औसधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौ तर सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ।
एपोनका निवर्तमान अध्यक्ष जि नारायण छेत्रीले नेपालमा पनि औषधि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले औसधि आत्मनिर्भरको लागि धेरै लबिङ गरेको भएपनी सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । कोरोना कालमा भारतले औषधि निर्यातमा विरोध गरेको भन्दै त्यो बेला पनि नेपालमा औषधि अभाव नभएको बताउनुभयो। नेपाली औषधि पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको रहेको बताउनुभयो।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले गुणस्तरीय औसधि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । डा. कार्कीले औषधि ब्यबस्थापन बिभागले औषधि क्षेत्रमा सहजताका लागी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग ब्यबसाय क्षेत्रमा ठुलो घाटा ब्यहोरेको बताउनुभयो। औषधि उधोगमा पनि प्रगति हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ। कोरोनाले उत्पादनमा बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। नेपालमा औषधिको बजार १८ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ। औषधि ऐन २०३५ संसोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रदर्शनीलाई खरिद बिक्रीको लागि मात्र नभै नीति निर्माणमा पनि फलदायी हुने बताउनुभयो। उहाँले उधोगमैत्री नितिनियम सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
फर्मा एक्स्पोका मिडिया संयोजक सन्तोष बरालले तीन दिनसम्म चल्ने एक्स्पो १२० वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ४५ वटा नेपाली औषधि उद्योगहरूले सहभागिता जनाउने जानकारी दिनुभयो । संयोजक बरालले एक्स्पोमा विभिन्न विषयमा टेक्निकल सेमिनार हुने जानकारी दिदै सञ्चारमाध्यमको सहजताको लागि मिडिया सेन्टरको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
एक्स्पोमा करिव ६० हजार अवलोकनकर्ताहरुले भ्रमण गर्ने छन् । उहाँले एक्स्पोले नेपालमा उत्पादन भइरहेको औषधी उत्पादनको प्रविधी र यसमा अपनाइएका संवेदनशिलताको बारेमा जनमानसमा सचेतना दिने, नेपालको औषधी उत्पादनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन अझ प्रविधी मैत्री र दक्षता प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
बरालले औषधी प्राबिधिक र फर्मासिस्टहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको नविन प्राविधिक ज्ञान दिने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
Tags: #ChitwanAPPONCorona Virus #Covid19Dr.Lochan karkiNepal medicine companyNepal Pharma Expo - 2022Nepal pharmaceutical AssociationPrajwaljang pandeySantos baral